Ciidamadii isku hor fadhiyey duleedka magaalada oo la kala qaadayo & Puntland oo ku baaqday in ay…. – Puntlandtimes
Ciidamadii isku hor fadhiyey duleedka magaalada oo la kala qaadayo & Puntland oo ku baaqday in ay….
GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aan helayno ayaa sheegaya inay meel wanaagsan ay marayaan dadaalo nabadeed oo lagu doonayey in lagu kala qaado ciidamadii dhowaan ku dagaalamay duleedka magaalada madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo.
Masuuliyiin Puntland ka tirsan iyo odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ayaa ku howlan sidii loo kala qaadi lahaa malayshiya beeleedkii ku dagaalamay duleedka Gaalkacyo isla markaana miiska laysugu keeni lahaa labada beelood.
Mid kamid ah waxgaradka gobolka Mudug ayaa sheegay in labada dhinac ay aqbaleen dadaalada nabadeed ee laga dhex wado ayna filayaan in maalmaha soo socda heshiis nabadeed laga gaaro dagaal dhul ku salaysnaa oo ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo.
Ciidamada Puntland ee la kala dhex dhigay labada dhinac ayaa la filayaa inay ku laabtaan fariisimadoodii marka ay waxgaradku ku guulaystaan nabadaynta ay ka dhex wadaan malayshiyaadkan.
Inta la xaqiijiyey 6 qof oo ka tirsanaa dhinacyadii dagaalamayey ayaa geeriyootay in ka badana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii labada malayshiyo oo hubaysan ay isku maandhaafeen dhul ku yaala duleedka magaalada Gaalkacyo.